I-China Abathanda i-Yoga Prakthiza i-Yoga eBangkok, eThailand abakhiqizi nabaphakeli | Amanzi eTspring
I-Thailand ingenye yezindawo ezinhle kakhulu emhlabeni zokuzijwayeza i-yoga.
Kungani Kufanele Uzijwayeze I-Yoga eThailand
Izinhlobo eziningi zothisha be-yoga bajikeleza eThailand kaningi ngokumangazayo. Abafundisi abaningi abasezingeni lomhlaba benze iThailand ikhaya labo! Lokhu kuqinisekisa ukuthi kuzoba nengcebo yezingxoxo ze-yoga nezindawo zokukhosela ongakhetha kuzo noma nini lapho uhlela uhambo lwakho.
Ngaphezu kwalokho, laba bafundisi bakha imiphakathi ye-yoga ephithizelayo. Uzozizwa usekhaya ngesikhathi uvakashele okokuqala isitudiyo se-yoga eThailand. Akuvamile ukuthi amakilasi aphume ayodla ndawonye ngemuva kokuzijwayeza, futhi isimo sokwamukela, esizolile sabai sabai saseThailand sisebenza kuma-yogis aso.
Nawa ama-3 weThailand Best Yoga Cities, nokuthi Ungazijwayeza kuphi:
I-Thailand iyimilingo ngempela, futhi iyikhaya lezindawo eziningi zokudlela ze-yoga ezweni lonke. Nazi ezimbalwa zalezo zindawo zemilingo zaseThailand zemilingo!
IBangkok ematasa mhlawumbe akuyona indawo yokuqala ongacabanga ngayo uma kukhulunywa ngokungena kumata wakho we-yoga, kepha ubuhlanya bayo yisizathu esiphelele sokuxhuma kabusha nomkhuba wakho. Ngenkathi inhlokodolobha yezwe inganikezi izikhala ze-yoga ezolile ozothola kwenye indawo, idolobha liziqhayisa ngama-studio amahle kakhulu.
EBangkok, abafundisi banolaka futhi izitudiyo zinikezelwe - ima ekilasini eYoga Elements ethathwa njenge “studio esikahle kunazo zonke eBangkok” noma i-Absolute Yoga ukukuhambisa eBig Mango ngaphambi kokuya endaweni yakho exotic. Noma, uma ufuna inkambiso yendabuko ethe xaxa, thola ukugeleza kwe-Iyengar ku-Empower Yoga.
Amanzi acwebezelayo acwebile acwebezelayo, izintende zezandla ezithintekayo namawa amangalisayo - iziqhingi zaseThai zifanelwe yilo lonke udumo lwazo futhi ziyindawo enhle yokwenza i-yoga. Isikhathi sihamba kancane eziqhingini, imvelo ikuzungezile, futhi amazinga okushisa afudumele akusiza ukhululeke futhi uzizwe ukhululekile.
Ungathola izitudiyo ezincane ze-yoga nemiphakathi enempilo eziqhingini eziningi ezivakashelwa kakhulu njengeKoh Tao, Koh Lanta naseKoh Samui, kepha enye yezindawo ezinhle kakhulu ongazivakashela ngqo i-yoga yiKoh Phangan.
Njengoba inendawo enhle ye-yoga, iKoh Phangan iyikhaya lezikhungo ezithile ezaziwa umhlaba wonke kubandakanya nendlunkulu yomhlaba wonke ye-Agama Yoga neThe Sanctuary, indawo yokubhuka emangalisayo enikeza nezidakamizwa zokukhipha ubuthi emzimbeni kanye ne-spa. Uma unentshisekelo yokuqedela ukuqeqeshwa kwakho kothisha be-yoga eningizimu emangalisayo yeThailand, hlola iJivani Yoga.
3. IChiang Mai
Okokugcina kodwa ngokuqinisekile okungenani yi "Rose of the North" - Chiang Mai. Njengoba kunabantu abangaba ngu-200 000, iChiang Mai iyidolobha elikhulu kunawo wonke enyakatho yeThailand. Izintaba zalo ezishanela, izimpophoma eziningi, nokudlidlizela okuntshontshile kuntshontshe izinhliziyo eziningi.
Ngicabanga ukuthi iChiang Mai, kanye nayo yonke inyakatho, iyindawo engcono yokuxhumana futhi nemvelo, ukuzijwayeza kwakho i-yoga, kanye nawe uqobo. Kunokuthile okuncane kuwo wonke umuntu lapha - ukudla okumangalisayo, indawo enhle, impilo yasebusuku emnandi, nezindawo eziwisa umhlathi - nomphakathi okhulayo wezempilo nempilo yomphakathi.
Iya kunoma yiliphi ikilasi kwesinye sezitudiyo esiseduze ne-Old City, njengeNamo Chiang Mai noma i-Wild Rose Yoga, futhi uzozizwa wamukelwa khona manjalo abafundisi be-yoga abafudumele ababiza le ndawo ekhethekile ekhaya. Impilo ebuyayo nokugcizelela impilo yemvelo kwenza inyakatho indawo ephelele yokugxila kumkhuba wakho.